Shirkadaada Digaaga S ** t Weli Ma Qabanaysaa Fashilka? | Martech Zone
Shirkadaada Digaaga S ** t Weli Ma Qabanaysaa Fashilinta?
Sabtida, Juun 19, 2010 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Caawa waxay ahayd habeen layaableh. Aniga iyo asxaabta qaar waxaan aadnay inaan soo aragno Eric Davis samee bandhigiisa hal nin, Bastard Cas, at the Indy Fringe tiyaatarka. Bandhigu waa mid cajaa’ib leh, oo soo jiidanaaya dhagaystayaasha kadibna si tartiib tartiib ah u baabi’inaya xubin kasta oo dhagaystayaasha ah midba mar.
Inta lagu guda jiro qayb ka mid ah riwaayadda, xubnaha dhagaystayaasha waxaa la waydiinayaa waxa ay riyadoodu tahay… waxaana ku xiga su'aalo ku saabsan waxa ay qabtaan. Bastard-ka Cas ayaa markaa ku qalqaaliya qofka inuu qaado tillaabo uu kaga fogaado waxa uu hayo do oo u samee tallaabada dhankooda riyoon. Sida qaar u sameeyaan, dhagaystayaashu way ku qaylinayaan, "Bastard". Maaddaama kuwa kale ay guuleystaan ​​oo ay ka fogaadaan tallaabada, waxaa farta ku fiiqaya dhagaystayaasha oo loogu yeeraa "Digaag S ** t". Natiijadu waa wax aan yareyn oo la yaab leh. Qof kasta oo ka mid ah dhagaystayaasha wuxuu ka baqayaa inuu joogo dhamaadka diiradda xiga ee Red Bastard.
Maxay tan ku leedahay Suuqgeynta? In ka badan intaad moodeyso.
Kani waa shaashad shaashad u gaar ah, caadi ah, keyword aad u tartan badan Google Dhugasho:
Waxaan la kulmay shirkad usbuucii la soo dhaafay oo adeeggeedu yahay kan gaar ah keyword. Shirkaddu waxay ku bixisay hanti (in ka badan $ 50k hal olole gaar ah) warbaahinta dhaqameed tan iyo markii la aasaasay. Qiimaha ololahaas ayaa sii waday inuu kordho markii muddo la joogo natiijooyinkuna way sii yaraanayeen. Waxay hadda raadinayaan suuqgeynta khadka tooska ah si ay u eegaan haddii ay joojin karaan dhiig baxa.
Markii aan fadhiyey qolka guddiga, ma jirin wax cabsi ah oo ka jirtay qolka markii aan ku booday dagaalka khadka tooska ah ee internetka, waxaa jiray rumaysad la’aan iyo kalsooni darro. Shirkadani si fudud uma diidin, runtiina waxay qaadanayeen guuldarro. Kuwii miiska fadhiyay oo riixayay inay horay u socdaan (oo aan ku jiro aniga) ayaa muran la’aan loo eegay "Bahal". In kasta oo shirkaddu ay si buuxda u aqoonsan tahay in waxa ay sameynayaan aysan shaqeyneyn, haddana waxay sii wadaan doodaha ka dhanka ah u dhaqaaqista qadka toos ahaan.
Waxay i xasuusisay inaan ku dhexjiro warshadaha wargeysyada. Waxaan daawaday qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha caqliga badan ee warshadaha xayeysiinta daawanaya eBay iyo Craigslist oo cirka isku shareeraya ka dibna ay xoqeen madaxooda iyagoo la yaaban sababta dakhliyadaha kala duwani u dhacayaan.
Waxaan si buuxda u aqoonsanahay shirkadaha ku shaqeeya cabsi darteed oo si taxaddar leh u qaata teknolojiyad cusub, laakiin la siiyay isbeddellada macaamiisha uga faa'iideysanayaan raadinta iyo warbaahinta bulshada sida hababka aasaasiga ah ee baaritaanka iibsigooda soo socda… sidee suurogal u tahay inaad su'aal ka weydiiso waxa muuqda? Wax dhib ah kama qabo shirkadaha inay qaataan baqdinta - laakiin waan naxay markii shirkadaha ay sii wadaan qabashada guul darrada.
Haddii aan luminno fursadda aan horay ugu wadi lahayn shirkaddan, waxaa laga yaabaa inaan damco inaan istaago oo aan u sheego waxa ay dhab ahaan yihiin ”. Digaag S ** t!” Red Bastard wuu ku faani lahaa… ama maya.
Fiiro gaar ah: Raali iga ahaada hadaad ka xanaaqsan tihiin xiddigihii muuqda… waa sida ugu fiican. Anigu sidoo kale kama soo horjeedo warbaahinta dhaqameed - laakiin fahamka sida isbeddelada habdhaqanka internetka ay u beddelayaan go'aan qaadashada macaamiisha ayaa fure u ah hagaajinta kharashaadkaaga warbaahinta. Xaaladdan oo kale, waa iska cadahay in xiisaha macaamiisha ee xalalka khadka tooska ah ay si aad ah u kordheen.
Tags: guuldareysigafaaruq indybasbaas cas
Douglas Karr Saturday, June 19, 2010 Thursday, June 18, 2015
RIP: Dhammaan macluumaadkaaga waxaa iska leh Matt
Maya, emaylku ma dhiman
Jun 20, 2010 saacadu markay ahayd 9:05 AM
Tallaabadaas ugu horreysa had iyo jeer waa tan ugu adag. Aad ayey u adag tahay in laga fogaado wixii la yaqaan. Dadka intiisa badani waxay ku xidhan yihiin silsilado iyaga u gaar ah. Waxaan rajeyneynaa in shirkadda la tixraacay ay go'aansadeen inay ka boodaan. Maqaal weyn.